MUUQAAL: C.raxmaan Cirro “Muuse Biixi ha soo bandhigo Waxay Farmaajo kawada Hadleen” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: C.raxmaan Cirro “Muuse Biixi ha soo bandhigo Waxay Farmaajo kawada Hadleen”
Feb 13, 2020 - 2 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Waxaa maanta magaalada Hargeisa dib ugu soo laabtay Gudoomiyaha Xisbiga Wadani C.raxmaan Cabdillaahi Cirro, Wuxuuna Muuse biixi ugu baaqay inuu ka Warbixiyo Kulankii uu la qaatay Madaxwaynaha DFS .
“Kulanka Farmaajo iyo Muuse anagu Qayb kamaanu ahayn, Balse wuxuu yahay Waajibka saran Madaxwaynaha inuu Shacabka si daah furan ula wadaago”. Ayuu yidhi C.raxmaan Cirro
Wuxuu sidoo kale sheegay in Wadahadalka DF Somalia iyo Somaliland loo baahan yahay inay Qayb ka noqdaan Xisbiyadda iyo Gobolada kala duwan ee Somaliland.
Dhinaca kale wuxuu ka hadlay kulan uu la qaatay dhowaan Muuse Biixi kaasi oo looga hadlay Muranka Mudooyinkii dambe ka taagnaa Somaliland ee la xidhiidha Gudiga Doorashooyinka, Wuxuuna sheegay inaysan waxba iska badalin Go’aankii Xisbiyaddu ay qaateen.
Maxay kawada had leen oo meesha yaala aanka ahayn Midnimadda Soomaliya waayo waxaa lagu Hungoobay wixii aad oran jirteen ((ICTIRAAF)) 30 sano ayay Sanduuq ku xidhnaayeen ilaa dhalin yaradoodii ay u hayaameen Muqdisho qaarna badaha Iyo Saxaaraha ku dhamaadeen intii hadhayna gidaarada Hargaisa ayay Busaarad la taagan yihiin.
Mr Ciro iska daa waxay kawada hadleene waxaad kawarantaa 8 dii qodob ee BUURTA Gacan libaax ay kasoo saareen Garxajis?! Iyadoo kuwa ugu adagi ay ahaayeen jaanibka Habaryoonis.
Riyo raacse ma laga saaray gudigii Doorashooyinka fake ga ah ee SNM? Buurmadoow wuu ka dhabeeyey dhaartiisii ahayd Riyo Raac lama taaban karo ama qalayl ku liqa ama qabow ku liqa Sank ayaa idiin daloola waxaasaa Dowlad ah.